Tenga Pregnyl muThailand - anabolic steroid hormone muBangkok
Itsva! Genotropin - Kubhadhara Kwemwedzi
Courier delivery free & Cash payment | Maawa: 9: 00 am - 8: 00 pm | Dana & WhatsApp, Telegram, Viber, Line + 66 61 686 66 55
Regular price 3,000.00 ฿ sero
Pregnyl ® 5000 IUpowder yegadziriro yejojo.
Pamwe pamwe nekuraira uku
Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa pakuora ndeyevanhu chorionic gonadotropin,
Iko inowanikwa kubva mumuviri wevakadzi vane pamuviri.
Kubata pamuviri kunogadzirisa kuumbwa kwemasero e-steroid muzvinyorwa zvepabonde zvichibva pamigumisiro,
Unhu hwemunhu anoronga hormone (LH).
Muchikadzi, chirwere ichi chinokonzera kuwedzera kwehuwandu hweprogesterone uye estrogen shure kwehuputi,
Muchirume chevarume, kutora kunokonzera kusangana kwe testosterone.
Kuonekwa kwezvirwere zvinorwisana negoradotropin yevanhu yega yega muviri hazvina kuonekwa nekuiswa kwekudzivirira.
Mafungiro akawanda evanhu chorionic gonadotropin (hCG) mu plasma yeropa kuvakadzi inotsanangurwa mushure meawa 20,
Muvarume - mushure memaawa e6 (mushure mejisi, mushure kamwechete).
Zvimwe zvinopesana mu pharmacokinetics muvarume nevakadzi zvinonyanya kukohwa nekuwanda kwemafuta mashoma
Fiber muvakadzi mumashure. Mushure mekuvhara kwemuviri, hCG inopinda muropa zvakanaka.
Ihafu-hupenyu hwekuora iawa 33 maawa. Inenge 80% yechirwere ichi inoparadzwa mumagunwe eimpvo. Kuparadzaniswa - nemukoro.
• kuderera kwekuberekwa kunogona kuwirirana ne idiopathic dissolutility;
• kunonoka mukukurudzirana zvepabonde kune vakomana, nekuda kwekushaiwa kwegonadotropic basa remasitori epituitary;
• cryptorchidism (kunze kwekuda kwemazuva ano).
• muzvirongwa zveART (kubatsira rubatsiro rwekuberekwa) kuti agadzirire follicle yekugadziriswa kwekugadzirisa maitiro ekudzivirira mavari;
• kubudiswa kweivulation nekushaya simba kunobatanidza nehutachiona hwekutsvaira mashura kana kuvhara;
• kutsigirwa kwechikamu chechirongwa chekuenda kumwedzi (kusanganisira panguva yekudzora maitiro ekudzivirira maitiro nekubatsira kuberekwa kwekwenyika) pamwe chete ne gonadotropin-kurega hormone yakafanana kana mamwe mishonga yekukurudzira kuvhara kwevakadzi kusununguka kunokonzerwa nekuzora nemhaka yekusagadzikana kweedrogen chekugadzirisa kubva kune imwechete Maererano neO WHO classification - kusagadzikana kweboka rokutanga rekivha).
Tisati tambosvika muzvinhu zvinoshandiswa ne lyophilized ye decolour, zvinyorwa izvi zvinowanikwa. Kutarisira intramuscularly zvishoma nezvishoma. Mhinduro yakagadzirirwa haisi pasi pekuchengetedza, sezvo kuwedzera kuchengetedza kusakwana kwechigadziro hakusi kuvimbiswa. Aya mazoro akafungidzirwa, kurapa kunofanira kugadziriswa nachiremba mumwe nomumwe zvichienderana nezvinodiwa kugadzirisa kusvika pakuiswa kwekuora.
Kugadzirira kwe follicle yekuvhara kana kuvharwa kwechivhota: kamwe yakayiriswa neyero ye 3000-10 000 IU.
Kutsigira kwechikwata chechikwata chekuenda kumwedzi: chiyero che 1000-3000 IU kamwe chete pazuva. Zvose zvinokwana 2-3 zvinopiwa: Zuva rimwe nerimwe 1 mumazuva 9 mushure mekuberekwa kwemukomana kana kuti mushure mekuvhara muviri (somuenzaniso: mushure mekusimudzirwa kwechirwere mumazuva 3, 6 uye 9).
Apo kusununguka kwevarume nekuda kwekutyorwa kwegadziriro iyi, spermatogenesis inorongedzerwa pamwe chete ne follicle-stimulating hormone 1 nguva zuva kana 2-3 nguva pane vhiki kwekanguva mwedzi ye3 yekuvandudza huwandu uye huwandu hwehutachiona. Inogona kushandiswa se monotherapy. Chirwere ichi chakanyorerwa 1000-2000 IU. Pakati pekubudiswa kwefungus, zvakakosha kumisa chigadziriso chetestrosterone, kana chiripo.
Kuderedza kufambira mberi kwepabonde kune vakomana - zvakanyanya kunyoreswa mumutengo we1500 IU, chirongwa chekurapa - mwedzi miviri ye6. Chirwere ichi chinoshandiswa 2-3 dzimwe nguva pavhiki.
Cryptorchidism: kune vana vari pasi peCNUMX yemakore emakore, chirwere che 2 IU chinopiwa 250 nguva kwemazuva 2 nedzimwe remwedzi unenge 7; Kubvira ku6 kusvika kuC2 makore - 6 nguva nemazuva 2 ye 7-500 IU yemwedzi ye1000; Kuvana vanopfuura 6 makore - 6 nguva mumazuva 2 kwemwedzi 7 kusvika 6 ME. Kana zvisina kukwana, nzira yekurapa inogona kudzokororwa.
• Ovarian hyperstimulation syndrome,
• kusagadzikana kusingadikanwi kwemavha mavari.
Zviratidzo zvekunyorovesa kwemavha mavari: kuora mwoyo, kurwadziwa kwepamuviri, chirwere, chirwere chepfuva, kuwedzera zvishoma kana kuenzanisa muhukuru hwemashizha, kana kuonekwa kwemavhisi mazhizha. Zviratidzo zvehutachiona hwekudzivirira hutachiona: kukura kwemashoko makuru evarian (anowanzova nemafungiro ekuputika), kuwedzera kuwanda, kuonekwa kwe ascites, kukurudzirwa kwepromboembolic zvinetso uye hydrothorax.
Varume: mvura inogadziriswa uye sodium inogadziriswa mumuviri nekuda kwekuwedzera uyerogen maitiro, kuchinja kwekuwedzera kwehutachiona hwema prostate, gynecomastia, erection uye penis kuwedzerwa nekuda kwekuwedzerwa testosterone maitiro muropa, hypersensitivity yezviyo, kuwedzera kuduku mumatsetse mumagwenga emagetsi, unhu kuchinja, Unhu hwechikamu chekutanga chekuyaruka.
Muvarume nevakadzi: kunogona kuve nekuvhiringidzika panzvimbo yejojo ​​nekuda kwehupenyu hwekuora (kurwadziwa, kubatana, kubvambura, kuchenesa, kuzvimba). Kuita hupenzi senzwi (fever, rash) zvinogonawo.
• Adrogen-inotarisa tumarara (inofungidzirwa kana yakagadzirirwa mazamu carcinoma mune varume, prostate carcinoma);
• kusagadziriswa zvirwere zvekupedzisira (kusagadzikana kwebasa rinonzi adrenal function, hypothyroidism, hyperprolactinemia);
• Kusakosha kwevakadzi vanobatanidzwa nekudzimirwa kwematope;
• kenza yemaawa,
• zvinokonzerwa neorigic to gonadotropic madhemoni zvinodhaka kana chero ipi zvayo yeiyo fungus.
Kubata pamuviri hazvipindirani mukudzivirira, kunorayirwa kuchengetedza chikamu chekuteerera kwekuenda kumwedzi. Zvisinei, hazvibvumirwi kutungamirira mishonga kune vanamukoti.
Chiri chorionic gonadotropin inoratidzirwa nekunyorera zvakanyanya. Zviratidzo zvekudarika zvakanyanya uye parenteral administration hazvitsanangurwi. Muvakadzi vanopesana nemamiriro ezvinhu ekudarika kwekuora, hutachiona hwekuvharidzira hunogona kuitika.
Ipiyopilized powder yegadziriro yejekiti inogadziriswa mu ampoule ye1500 IU; 5000 IU. Iyo kitambo inosanganisira solvent. Mubhokisi rebhokisi, 3 ampoules akaora mukati mutsva.
Kuchengetedza kunofanira kuchengetwa mufiriji mumamiriro akasviba pamusana wekushisa kwe2-15 ° C kwete kupfuura makore 3. Cherechedzai zvinotaurwa nezvekushisa mumamiriro ekufambisa.
Kushanda zvishandiso: chorionic gonadotropin.
Zvimwe zvinobatsira: mannitol, sodium dihydrophosphate anhydrous, sodium hydrophosphate anhydrous, sodium carboxymethylcellulose.
Mahomoni, maitiro avo uye anti-hormonal drugs
Mishonga inobva kumahomoni evanhukadzi zvepabonde uye maitiro avo akafanana
Kune ngozi yakawedzerwa yekuwanda kwepamuviri nehuwandu hweivulation nevanhu chorionic gonadotropin. Muchiitiko chekubatsira kwekuberekwa kwekwenyanzvi, hutano hwekusununguka kwepamuviri hunowedzera. Kana pane zviratidzo zvekuputsika kwe tubal patency - inowedzera dambudziko re ectopic (ectopic) pamuviri. Muchikamu chekupedzisira, mushure mokutanga kwekuita pamuviri, uterine nzvimbo ye fetal egg inofanira kusimbiswa ne ultrasound kuongororwa kwechibereko. Usati wasarudza chirwere ichi, endocrinopathies dzisingadzorwi dzisiri dzisiri nguva dzose (kusagadzikana kwetachiona gland, pituitary gland kana grenal adlands) kunofanira kuiswa kunze.
Kubata pamuviri kuvakadzi vane infertility pamusana pekushaya maturo kusakisa kana kuputika kunogona kutungamirira kune zvisina kufanira ovarian kugadziriswa nemagadzirirwo ekutenderera kwe-follicle-stimulating hormone. Muzviitiko izvi, kare uye panguva yekurapa (panguva dzenguva dzose), ultrasound kutarisa kunokosha kuti uone kufambira mberi kwe follicle. Inokurudzirwa kuti nguva nenguva ione zviripo zve estradiol muropa serum. Kuwedzera nokukurumidza kwe-estradiol (2-yezuva 2-3) kunogona kuratidza kukura kwenhamba yakawanda ye follicles. Kuda kufungidzirwa kwemasvosve kunogona kusimbiswa ne ultrasound kuongororwa kwe mavha mavari. Kana zvichizosimbiswa kwehutachiwana, zvinokosha kuti pakarepo usiye kuiswa kwemari ine follicle-stimulating hormone, sezvo pane dambudziko rekuvandudzwa kwe ovarian hyperstimulation syndrome uye induction of multiple ovulation. Kuchengetedzwa kwakanyanya kunofanira kutorwa kunoporesa varwere vane mazamu akawanda.
Kuiswa kwevanhu chorionic gonadotropin kunokonzera kuwedzera kwekushandiswa kwe androgens, saka kunogona kuve nekuderera mukati mamiriro ezvinhu kana kudzokera kune yakakomba kana yakagadzikana yemwoyo inoshaikwa, migraine (kusanganisira migraine mu anamnesis), kuwedzera kwehutano, kushaya simba rekuita basa, kushaya chirwere . Kune vanhu vakadaro, mushonga uyu unotarisirwa nekuchenjerera pasi pekutariswa kwehutano hwepedyo.
Kuti uchengetedze nguva isati yamboita zvepabonde kana epiphyseal kuibva mumajaya munguva yekuyaruka, zvakakosha kuvapa nekuchenjerera panguva iyi. Munyaya iyi, kuiswa kwekuora kunofanira kuitwa pasi pekutonga kwehurumende ye musculoskeletal system.
Foni: + 66 61 686 66 55
HGH Singapore - Kutenga kuwedzera hormone muSingapore